New York ubhekwa hhayi kuphela idolobha elikhulu kunawo wonke e-United States, kodwa futhi muzi omkhulu emhlabeni. Njengoba ebalelwa abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-8, itholakala engxenyeni eseningizimu-mpumalanga ye isimo igama elifanayo ogwini Atlantic.
New York ezikhangayo aziwa cishe wonke umuntu, yasungulwa emakhulwini eminyaka ambalwa adlule, ekuqaleni kwekhulu le-17. Kuyathakazelisa ukuphawula yokuthi Kudume ukuthi yakhiwa bamakoloni Dutch, ngakho kuze 1664 umuzi wabizwa ngokuthi naseNew Amsterdam.
Isigaba 1. New York. Izikhangibavakashi harbor.
Babhekwa iwuphawu State Statue of Liberty yethulwa e-United States kanye France. Abaphathi bedolobha unqume ukumisa isikhumbuzo ku obakhathalelayo. Freedom. Kukholakala ukuthi lokhu lesikhumbuzo uyakhonza zonke efika Melika (njengoba abantu abaningi abavela kwamanye kanye izivakashi ukwazi). Esifanekisweni ungowesifazane 46-foot nge ithoshi evutha esandleni sakhe sokunene. Ngakwesokunxele, esikhundleni salokho, kuyinto avuliwe okuyinto libhalwe ngamagama amakhulu usuku ukusayinwa Simemetelo State Ukuzibusa. Ngo umqhele lesikhumbuzo angabhekwa 25 amafasitela. Kwakulapho, futhi kulo lonke izwe elalaziwa izivakashi platform wokubuka.
Isiqhingi Ellis Island, ngekhulu le-19 ayebhekwa iphuzu yokwamukela abokufika, okuyinto kanye kwakungekaNkulunkulu ongashadile kuSamuweli Ellis. Manje sekuwumkhuba intandokazi idolobha epaki. On endaweni yayo itholakala iminyuziyamu eziningana, futhi lapha ungathola isikebhe.
Isigaba 2 laseNew York. Izikhangibavakashi Manhattan.
Ibhethri Park - ingenye izingxenye ezithule futhi ehlanzeke ka Manhattan, egcwele lenqwaba amapaki encane, tikwele esplanade. Iyisonto ezithinta okunethezeka yayo namabhilidi yokuhlala, enophahla ukuthi uvule imibono engachazeki River Hudson. Le ndawo kubhekwa oasis kweqiniso phakathi okumatasa komuzi.
Graun Zero (yenhlekelele) - indawo lapho khona babhujiswa bafa ngesikhathi isenzo amaphekula ngo-2001 i-Twin Towers. Manje lavuselelwa yisikhumbuzo.
Street wesigodi oyingqophamlando Sout port itholakala nje ngesikhathi lapho Fulton Street ngokushelela ku-East River. Lapho ungakwazi ngempela bazizwe namakhulu eminyaka uxhumano. abathandi Umlando uzongithanda uhamba ibanga phakathi endala bokwakha edolobheni, sailboats eboshelwe bayohlatshwa umxhwele ubuhle baso romantics namabhilidi yesimanje nje akakwazi ukuba isigqoko. Njengoba kwase kukhona, ungase futhi ukuya wangaphambili izinhlanzi emakethe, port enyuka Museum, ukubheka isiteshi isikebhe kanye ukuvakashela nemibukiso eminingi, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo futhi eateries. Yonke indawo esibheke Brooklyn Bridge.
Chinatown - kuba uhlobo endaweni ngenombolo evelele Chinese ubuzwe labantu. Isikhungo sezohwebo ezokuvakasha. Ngo Chinatown ungathenga eziningi eziyisikhumbuzo ezishibhile, isidlo noma ukudla okumnandi futhi ezishibhile, kanye usebenzise eyodwa iziphakamiso eziningi ukuya izinkambo edolobheni indawo.
Mhlawumbe ucabanga ngaleli dolobha, uyakhumbula elikhulu ehlathini kahle letingemadayimenshini inhliziyo muzi. Lokho ngokuvamile ke okuvezwa emabhayisikobho American. Central Park New York ingenye amapaki esikhulu kunazo zonke emhlabeni, futhi kuphela onyakeni evakashela cishe abayizigidi ezingu-25.
Isigaba 3. New York. Izikhangibavakashi eBrooklyn.
Lokhu isifunda udume yokuthi inezinhlobo lenqwaba abasuka CIS futhi izwe elaliyiSoviet Union ngaphambili. Bathi kukhona kungenakwenzeka ukuphila ukuphila hhayi ukufunda isiNgisi: izimpawu ikakhulukazi ngesiRashiya, intengo tags ezitolo ekuhumusheni.
Okwavelela nhlonhlo kubhekwa eBrooklyn Coney Island. Phakathi abendawo ukwazi ukuthi ngokuyinhloko ngenxa emabhishi ayo kanye amapaki ezokuzijabulisa. Kule ndawo, efana lonke futhi eziningi izivakashi, ikakhulukazi labo lucky ngokwanele ukuba zivakashe eNew York ebusika. Embozwe iqhwa uqweqwe amabhishi, ocean wachela, ukuvakasha ivulekile - konke lokhu ikuvumela ukuba uphumule ngempela kokubili ingqondo nomzimba.
Labo abafika muzi nabantwana, kutuswa ukuba uvakashele aquarium omkhulu, sidluliselwe Coney Island okungenhla Ibhethri Park.
Waterpark "21" (Volzhsky), noma kanjani ukubuyela ebuntwaneni
Amahhotela Syktyvkar: uhlu lwamakheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Londoloza ngezibani. Isibani LED "Philips"
Yini okufanele ibe ski isudi
Ungadala kanjani umculo kukhompyutha ngendlela efanele?
Ososayensi bavuselele ukubukeka kweTutankhamun. Wayengubani umbusi kaNkulunkulu emhlabeni?
Ukulungiswa kwe-Laser kwombono ku-Minsk: ukubuyekezwa kwemitholampilo nokubuyekezwa ngabo
Ingabe umjovo kwesisindo?
"Tatiana" ikhekhe. Izimfihlo ukupheka okukhona emangalisayo
Sandro Alex: career kanye indlela yempumelelo Brazilian football player